KENYA: Lammaane kasoo kale jeeda Somalia iyo Kenye oo furriinkooda aad loo hadal hayo - Calanka.com
Calanka.com » Bulsho » KENYA: Lammaane kasoo kale jeeda Somalia iyo Kenye oo furriinkooda aad loo hadal hayo
June 29, 2020 ( June 29, 2020 ) 0 Comments 0 Views0
“Aniga iyo Ben waan kala ‘tagnay’, mustaqbalka waxa xiga ma ogi, laakiin waxaan ku faraxsanahay wakhtigii quruxda badnaa ee aan wada qaadannay, iyo ilmaha qurxda badan ee aan isku dhalna.y”.
Aamina ayaa sheegtay inay muddo bil ka hor kala tageen Ben balse ay go’aansatay inay hadda uun shaaciso.
“Waxay ahayd hal bil oo xanuun badan oo ilmadu ay iga da’aysay balse waxaan ogahay in maalin un aan iftiinkii heli doono”, ayey ku qortay barteeda Instgramka.
Mar ay Aamina ka jawaabeysa dareenka ah inaysan sax ahayn inay nin masiixi ah guursata iyadoo Muslim ah ayaa waxa ay tiri, “Waxba kama soo qaadina rrintaasi, waxa muhiim ah ayaa ah in Ben uu yahay nin wacan taas ayaana i qancisay”.
Jaraa`idka Forbes ayaa soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin dadka caanka ah ee lacagta badan ka sameeya aaladda TikTok ee uu Mareykanku...